Ogaden News Agency (ONA) – Maailma kylässä -festivaali oo Jaaaliyada Ogadeniya ee Finland si weyn uga qeyb qaadatay
Maailma kylässä -festivaali oo Jaaaliyada Ogadeniya ee Finland si weyn uga qeyb qaadatay
20 Sawir Hoos ka daawo
Jaaliyada Ogadeniya ee Wadanka Finland aoo Xubin ka ah Feesto weyn oo sanad kasta lagu qabto wadanka Finland ayaa Feestada Sanadkan ka qeybgashay Maailma kylässä -festivaali oo ah Carwo weyn oo sanad kasta lagu qabta caasimada wadanka Finland. Carwadan ayaa waxaa la isaga yimaada aduunweynaya waxaana kasoo qeyb gala dad kor u dhaafaya 80,000 qof iyo ilaa 400 urur oo soo bandhiga hidaha iyo dhaqanka, heeso, iyo waxyaalo gooni ah oo isugu jira madadaalo iyo dhaqameed.
Hadaba Jaaliyada Ogadeniya ee Finland ayaa carwadan kaqeyb gashay 24 iyo 25 May 2015. Shalayto jaaliyadu waxay soo bandhigeen Heeso iyo hiddo iyo dhaqanka Somalida Ogadeniya iyaga oo halkaas Dhaantooyin iyo ciyaaraha goonida u ah Shacbiga Somaliyeed soo bandhigay. Jaaliyada oo madasha carwada ku sameysatay Xarun Teendho weyn ah, ayaa waxaaa halkaas sidoo kale lagu soo bandhigay cunada goonida u ah shacbiga Ogadeniya sida, Saanbuuse Somali, Shaah Somali, Macmacaanka iyo cunada fudud ee deegaanka Ogadeniya laga cuno. Gabdho halkaas cunadaas ku qeybinayay ayaa ONA u sheegay in meesha hilib Geel iyo Caano geel uun ka maqnaa midaasna sanadka danbe hadii lagu guleysto la keeni doono. Jaaliyada yaa ku fikiraysa in sanadka danbe teendhada ay u badali doonaan Aqal Somali, midkaas oo muujin doona qaab nololeedka umada ree guuraga ah.
Maanta oo Axad ah, 25 May, waxaa jaaliyadu madasha shirka la timid olole ka gadisan kii shaleyto, waxaana si toos ah looga baafiyay marxalada nololeed iyo siyaasadeed ee shacabka Somalida Ogadeniya, iyaga oo ka waramayay “Identity Issue” Jaaliyada Ogadeniya ayaa waxaa lasiiyay saacado ay kaga hadlaan Taariikhda Ogadeniya iyaga oo la hadlay dad kor u dhaafaya 70,000 shaqsi oo kasoo qeyb galay carwadan, halkaas oo ay kaga warameen taariikhda Ogadeniya, Halganka ka socda Ogadeniya iyo xasuuqa lagu hayo shacabka Somalida Ogadeniya.
Jaaliyada Ogadeniya ayaa waa lagu harqiyay Su’aalo aad u fara badan, waxaana dadkii kasoo qeyb galay carwadan ay aad isugu dayeen inay wax badan ka oggaadaan Qadiyada Ogadeniya, iyaga oo warqado aad u tiro badan oo loo qeybiyay bulshadan halkaas lagu dhameeyay, xubnihii ka shaqeynayay howshan ay bilaabeen inay u sheegaan bulshadan faraha badan ee daneyneysa inay ogaaadan Qadiyada Ogadeniya inay websiteyada Ogaden.com iyo websiteka OYSU ka aqristaan marxalada shacabka Ogadeniya halgankoodu ku suganyahay.
Gudomiyaha Jaaliyada Finland iyo Xoghayaha OYSU finland oo hoggaaminayay mashruucan ayaa ONA u sheegay in lagu guuleystay carwadan sanadka soosocdana sidan si ka weyn in jaaliyadu uga faa ideysan doonto. Sanadba sanadka ka danbeeya waxaan baranayna shacab iyo haayado aad u badan kuwaas oo xidhiidh joogto ah aan sameysano iyo wada shaqeyn waqti dheer ah. Kuma eka uun kaliya shalay iyo maanta shaqadani, dadka aan maanta baranay waxay ahaan doonaan dad xidhiidh dheer aan yeelano, wada shaqeyn ay na dhexmarto.